ICosatu ithi izoqhubeka nokulwela imisebenzi | Bayede News
Home/ Izindaba/ICosatu ithi izoqhubeka nokulwela imisebenzi
ICosatu ithi izoqhubeka nokulwela imisebenzi
NAKUBA abeStatistics South Africa bethi izibalo zabantu abangasebenzi ezweni zehlile, kukhona ukukhuluma okuthi lezi zibalo azibeke isithombe esiyiso. Izibalo zikhomba ukuthi kubantu abayizigidi ezingama-38,1 abaneminyaka ephakathi kweli-15 kuya kwengama-64 eNingizimu okungabaneminyaka ebavumelayo ukuthi basengasebenza, abayizigidi eziyisi-6,1 abanayo imisebenzi. Lesi sibalo sisho ukuthi bangama- 27,1% abantu abangasebenzi eNingizimu Afrika.
Lezi zibalo zethulwe nguMnu uRisenga Maluleke oyisikhulu sakwaStatistic South Africa kuleli sonto.
UMaluleke uthe imfundo ineqhaza elibalulekile ekwehliseni amathuba okuthi umuntu angawutholi umsebenzi. Uthe ukusho lokhu ngoba abantu abanomatric kuyaphansi kusenesibalo esiphezulu kubona sabangasebenzi. UMaluleke uthe: “Abantu abafunde bagcina ngaphansi kukamatikuletsheni bangama-32% kanti abanomatikuletsheni bangama- 28%, kuthi labo abaneziqu bayisi-6,7%.”
Abantu abangasebenzi uma behlukaniswa ngokweminyaka kutholakale ukuthi abaphakathi kweminyaka eli-15 nama-24 bangama 54,7% abangasebenzi, abantu abaneminyaka ephakathi kwama-25 nama-34 bangama-33% abangasebenzi, kuthi abaneminyaka ephakathi kwama-35 nama- 22%, abeneminyaka esukela kuma- 45, kanti abantu abaphakathi kweminyaka engama-55 nama-65 bangama-10% abangasebenzi.
Abantu besifazane banesibalo esiphezulu uma beqhathaniswa nabantu besilisa abangasebenzi. Ngonyaka owedlule abantu besifazane abebengasebenzi bebengama-33,3% kanti kulo nyaka bangama-34,4%. Abantu besilisa abebengasebenzi ngonyaka owedlule bebengama-26.2% kanti kulo nyaka bangama- 28,8%. Isifundazwe esihamba phambili ngokwentuleka kwamathuba omsebenzi kubantu abaneminyaka ephakathi kweli-15 kuya kwengama-24, i-Eastern Cape ngama 37,1%, kanti iLimpopo iyona enesibalo esincane ngama-25,9%.
Kuleli sonto iCosatu ibe nokhukhulelangoqo wombhikisho ezweni ikhala ngokudilizwa kwabasebenzi nokuntuleka kwamathuba emisebenzi.
Ukukhuluma bekuhlukene kubantu ngokweseka lesi siteleka kukhona abathi lo mfelandawo wezinyunyana udlala ngegeja kuziliwe ngoba uyingxenye yazo zonke izinto eziqhubeka kuHulumeni.
Abanye baveze ukuthi uMengameli weCosatu uNkk uZingisa Losi uyishaya emuva ayishaye phambili ngoba yena uqobo wayesohlwini lwabayisithupha abaphambili uMengameli uCyril Ramaphosa egadla ngabo engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-ANC eNasrec ngowezi-2017.
“Bangasho kanjani ukuthi balwela amathuba emisebenzi nokudiliza kwezinkampani ekubeni babeyingxenye yokuthathwa kwezinqumo uKhongolose ufaka amalabour brokers ezweni,” kusho elinye ilungu lomphakathi elicele ukungadalulwa.
Kukhona abaveze ukuthi lesi yisikhathi sokuthi iCosatu iphume ekhwapheni le-ANC noHulumeni kucace ukuthi ibeka phambili izimfuno nezidingo zabasebenzi.
Imibhikisho yeCosatu igqugquzelwe ukuphela kwemisebenzi kuHulumeni nasezinkampanini ezizimele.
Ukufunda kwezinye izikole kuphazamisekile ngenxa yemashi yeCosatu. Okhulumela uMnyango Wezemfundo Eyisisekelo uMnu u-Elijah Mhlanga uthe kuyabakhathaza ukuthi njengoba izikole zivulwa nje ngakho kodwa seziyaphazamiseka.
Okhulumela iCosatu uMnu uSizwe Phamla uthe umyalezo wabo usobala abakufunayo ukuthi kuvikelwe imisebenzi. Uthe ngisho nalaba basebenzi abangazihlanganisanga nesiteleka abaqome ukuhlala emakhaya angeke babe nenkinga ngoba isiteleka besigunyazwe yiNational Economic Development and Labour Council (Nedlac).
ICosatu ithi ibingaqondile ukubamba ngqi umnotho ngale mashi kodwa ibizwakalisa uvo lwayo ngokulahleka kwemisebenzi ezweni futhi izoqhubeka nokulwela lokhu. UNks uLosi obeyingxenye yemashi KwaZulu-Natal uthe ukungaqashwa kwabantu nokulahleka kwemisebenzi yinkinga ebhekene nezwe lonke.
“Angeke sikwazi ukubhekana nalezo zinkinga uma sizobeka wonke umthwalo emahlombe kaHulumeni njengokuthi abantu balindele izibonelelo zikaHulumeni. Ubani ozosiza kulokho uma kuwukuthi abantu abasebenzi,” kubuza uNks uLosi.
Ngasodabeni luka-Eskom olusematheni kulezi zinsuku iCosatu ithi ayihambisani nhlobo nesiphakamiso sikaMengameli uRamaphosa sokuhlukanisa izigaba ezintathu kwale nkampani okuzosho ukuthi kuzoba amabhizinisi ahlukene kaHulumeni kusuka ekuphehleni ugesi, kuya ekuwusabalaliseni.
UMnu uMike Shingange wenyunyana iNEHAWU uthe akusho ukuthi izikhalo zabo azakhi mqondo kodwa balwela imisebenzi yamalungu abo. “Akukwazi ukuthi akunamqondo ukuthi siyizwe ake sihlanganise amakhanda siqhamuke neqhingasu lokuvula amathuba emsebenzi. Asikwazi ukuhlala sisonge izandla sivumele ukudilizwa”.